तपाईलाई दिउँसो पनि हाइ आउँछ ? सावधान ! « Online Sajha
काेराेना भाइरस नेकपा (नेकपा) प्रधानमन्त्री सरकार केपी शर्मा ओलि प्रचण्ड राेल्पा संसद् विघटन
तपाईलाई दिउँसो पनि हाइ आउँछ ? सावधान !
कयौँ पटक निद्रा पुरा नहुने र स्ट्रेसका कारण हाइ आउने गर्दछ। दिनमा एक वा दुई पटक त हाइ आएकै हुन्छ। शरीरमा जब थकाइको महशुस हुन्छ, तब हाइ आउने गर्दछ। यस बाहेक हाइ आउनुको पछाडि शरिरीक तथा मानसिक कारण पनि हुने गर्दछन्। हाइ तपाईको स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ। यदी तपाईलाई दिनभर पनि धेरै नै मात्रामा हाइ आउने गर्दछ भने यी रोगको संकेत हुनसक्छ। यदी तपाईलाई धेरै नै हाइ आउँछ भने त्यसलाई सामान्य रुपमा नलिनुहोस्। आउनुहोस् जानौँ हाइ आउनुको कारण:
१) हृदयघातको खतरा :
चिकित्सका अनुसार धेरै हाइ आउने व्यक्तिलाई हृदयघातको खतरा हुने गर्दछ।
२) हाइपोथायराइड :
दिनमा धेरै पटक हाइ आउँछ भने यो हाइपोथायराइडको संकेत हो। शरीरमा थायराइड हर्मोन कम हुने कारणले दिनभर पनि हाइ आउने समस्या देखिरहन्छ।
३) फोक्सो सम्बन्धी रोग :
धेरै औषधि लिने कारणले पनि हाइ आउने गर्दछ। यसो हुँदा फोक्सो सम्बन्धी रोगको खतरा बढ्ने गर्दछ।
४) शरीरमा तापक्रम बढ्नु :
शरीरमा धेरै तापक्रमका कारण पनि हाइ आउने गर्दछ।
५) एनर्जीको कमी :
एनर्जीको कमीका कारण पनि धेरै पनि हाइ आउने समस्या देखिने गर्दछ। यदी तपाईको शरीरमा उर्जा छैन भने तपाईलाई निद्रा र आलस हुने गर्दछ। यस कारण तपाईलाई धेरै हाइ आउन थाल्दछ। यसको संकेत हो की तपाईको शरीरलाई आरामको आवश्यकता छ। यस्तो समस्याबाट बच्नका लागि सधै शरीरलाई उर्जावान राख्नुहोस्।
६) मृगौला वा लिभरमा समस्या :
विशेषज्ञका अनुसार मृगौला वा लिभर खराबी भएमा पनि धेरै हाइ आउने गर्दछ। यो समस्या देखिदा धेरै थकान महशुस हुने र हाइ आउने विशेषज्ञ बताउछन्। धेरै हाइ आएमा यसरी गर्नुहोस् सामान्य घरेलु उपचार पानी पिउनुहोस् स् कयौँ पटक शरीरमा थकान महशुस हुने र निद्रा पुरा नहुँदा हाइ आउने भएकाले यसलाई रोक्न धेरै पानी पिउनुहोस्। पानी पिउँदा शरीर ताजा हुने र हाइ रोकिने गर्दछ। सास राम्रोसँग लिनुहोस् स् हाइ आउनुको कारण शरीरमा अक्सिजनको कमी पनि हुन सक्छ। त्यसैले लामो सास लिनुहोस्। व्यायाम तथा आराम स् कहिलेकाही एक्लोपना महशुस हुने कारणले पनि हाइ आउने गर्दछ। यसो हुँदा केही बेर व्यायाम गर्नुहोस्। थकानका कारण हाइ आएको छ भने एकै छिन आराम गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईको हाइ आउने समस्या रोकिन्छ। एजेन्सीकाे सहयाेगमा
प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख १५ गते सोमवार
वडा–वडा र गाउँगाउँमा स्वास्थ सेवा, प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा औषधी अभाव
शरीरको लागि भिटामिन-सी किन आवश्यक?
सुविधासम्पन्‍न अस्पतालसहितको जहाजको समुद्री परीक्षण सफल
सेनिटाइजरको अधिक प्रयोग खतरनाक
पुष्पखेतीमा रमेकी बर्दियाकी विष्णु
विप्लवसँग छिट्टै वार्ता हुन्छ : प्रधानमन्त्री
कुटपिटबाट रोल्पामा एकको मृत्यु
कार्यालय :– रोल्पा नगरपालिका–४ लिबाङ, रोल्पा
सञ्चालक :- इश्वरी जिएम
सम्पादक:- प्रतिभा सुनार